﻿ ​‘वडामा आएका काम जतिसक्दो छिटो सक्ने प्रयास गर्छौं’
आजभोली विकास निर्माणका कामहरु हुँदैछन् । तिनै कामको योजनाहरुको सम्झौतामा व्यस्त छौँ ।
वडाको विकासको अवस्था कस्तो छ अहिले ?
अहिले वडाको विकासको अवस्था अपेक्षा गरे अनुरुपको छैन । अहिले बाटो कालोपत्रे गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ । ड्रेनहरु बनिरहका छन् । खोलानालाको सरसफाईहरु गरिरहेका छौँ । बजेटको अपर्याप्तता लगायतका विविध चुनौतिहरुको कारण सोचेजस्तो भएको छैन ।
वडाको कुन कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
हामिले यस वडाका बाटाघाटा र खोलानाला सरसफाईलाई विशेष प्राथमिकता दिएका छाँै । यो वर्ष लगभग २५ लाख बजेट बाटो कालोपत्रेको लागि छुट्याइएको छ । यो कालोपत्रे सम्पन्न हुने क्रममा छ ।
कर्मचारीहरुले ठिकै सहयोग गरिरहेका छन् । अहिले यस वडामा जम्मा ४ जना कर्मचारीहरु रहेका छन् । वडाको कार्यहरु सञ्चालन गर्नको कर्मचारीहरुको पनि अभाव रहेको छ ।
तपाईले चुनाव अगाडी जनता समक्ष गर्नुभएको प्रतिज्ञाहरु के के पुरा गरिसक्नु भयो ?
हामीले चुनाव अगाडी सिंहदरबारको अधिकार गाउँघरमै हुन्छ भनेका थियौँ त्यो पुरा गरेका छौँ । वडामा आएका कामहरु पनि जतिसक्दो चाँडो सक्ने प्रयास गरेका छाँै । त्यस्तै हामीले बाटो निर्माण गछौँ भनेका थियौँ अहिले धेरै बाटोहरु कालोपत्रे हुँदै छन् । हिड्न नसक्ने बाटो पनि हिड्न मिल्ने बनाएका छौ ।
यो वडाको मुख्य समस्या नै बाटोघाटो हो । यहाका प्रायः बाटोहरु पिच छैनन् । आँपगाछीदेखि वडा कार्यालय आउने बाटो नै पिच छैन । हामी जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा अगाडी उक्त बाटोमा हिड्ने अवस्था थिएन । अहिले हामीले गिटि हालेर बर्षाको समयमा पनि हिड्न मिल्ने बाटो बनाएका छौँ । अब बजेट आयो भने पिच गर्नेछौँ । शिक्षाको अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले ठिकै छ ।
यी समस्याहरु समाधानको लागि के गर्नुपर्ला ?
विकास निर्माणको काम गर्नका लागि त बजेट नै आवश्यक पर्छ । यो वडाको समस्या बजेटको कारणले नै देखा परेको हो । यसको समाधान पनि बजेटद्वारा नै हुन्छ । त्यसैले यी समस्या समाधानको लागि विभिन्न दातृ निकाय र नगरपालिकाको सहयोगको आवश्यकता रहेको छ । यस्तै नगरपालिकाको ध्यान पनि यो वडामा नपरेको कारण विकासको काम अगाडि वढ्न नसकेको हो ।
हामीले माग गर्ने भनेको नगरपालिका, प्रदेश सरकार र विभिन्न दातृ निकायसँग हो । नगरपालिकाले आफुसँग भएको बजेटअनुसार हाम्रो वडालाई बजेट छुट्याइरहेको छ ।
तर, प्रदेश सरकारले भने यस वडाको विकासमा एक रुपैया लगानी गरेका छैनन् । संघीय सरकारले यसपटक बजेट १० लाख छुट्याइ दिएको सुन्नमा आएको छ ।
अन्त्यमा यस वडाका वडावासीमा हामीले अझै पनि वडाको विकास गर्न खोजिरहेको छाँै । यस वडाको विकास भनेकै जनताको सहयोगले हुने हो । आशा छ, यस वडाको विकासको लागि सबैतिरबाट सहयोग मिल्ने छ ।